Fialan-tsasatra Fiji, fialantsasatra ao amin'ny paradisa | Vaovao momba ny dia
Raha tianao ny morontsiraka ary ianao dia iray amin'ireo mpizahatany izay tsy mahatsapa fialan-tsasatra izay tsy eny amoron-dranomasina, miaraka amin'ny masoandro sy fasika avy eo ... dia nanandrana ny Nosy Fiji? Eny, tsy eo an-joron'izy ireo izy ireo fa mendrika tokoa ny dia.
Ireo nosy dia mandrafitra repoblika tsy miankina ary any Oceania, izy ireo dia mitovy habe amin'i Slovenia ary araka ny ho hitanao amin'ity lahatsoratra ity sy ireo sary miaraka aminy, dia sarotra ny manadino azy ireo. Ala mikitroka, ranomasina turquoise, hafanana, haran-dranomasina, honko fasika fotsy ary hotely mihaja nefa koa ho an'ireo mpanao kitapom-batsy. Mandehandeha!
1 Nosy Fiji
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any Fidji sy ny fomba fivezivezena
3 Zavatra tokony hatao any Fiji
Fidji dia mazàna no mandrafitra azy nosy lehibe roa, Viti Levu sy Vanua Levu, ary nosy kely kely hafa toa an'i Koro, Kadavu, Gau ary Taveuni. Amin'ny ankapobeny dia nosy volkanika izy ireo ary raha voafaritra kokoa amin'ny toerana misy azy ireo isika dia hiteny fa nosy izay an'ny vondron'ireo Melanezia ary hita any akaikin'i Tonga sy Vanuatu.
Zanaka nosy be tendrombohitra, miaraka amin'ny tampon-tampon'ny haavo 900 metatra mahery sy lemaka lonaka sasany. Manana koa honko, ala, haran-dranomasina ambanin'ny rano sy zavamaniry sy biby manan-karena. Miparitaka ny zava-drehetra noho ny toetrandro mando manjaka izany na dia tsy be loatra aza ny hafanana. Ny volana mangatsiaka indrindra dia ny Mey ka hatramin'ny Novambra miaraka amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 19 sy 29 ºC ary eo anelanelan'ny Desambra sy aprily dia eo anelanelan'ny 22 sy 33 ºC.
Soso-kevitra ny handeha lavitra ny vanim-potoana orana, eo anelanelan'ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra. Amin'ny fahavaratra fahavaratra mihitsy! Manararaotra! Angona hafa? Ilaina ny milaza an'izany ireo nosy dia afaka amin'ny tazo, tazo mavo na aretina tropikaly hafa. Tsara vintana! Etsy andaniny, eto ny olona maotina sy nentim-paharazana, ka tsy dia any amin'ny hotely loatra fa raha mankany amin'ny vohitra ianao dia miezaha ho maotina.
Ny vola dia ny Dolara Fiji miaraka amina faktiora 5, 10, 20, 50 ary 100 ary farantsakely vitsivitsy. Misokatra amin'ny 9 ora sy sasany maraina ny banky ary mikatona amin'ny 30 ora hariva na dia misy maso ivo-mpanakalo vola miasa 4 ora isan'andro ao amin'ny seranam-piaramanidina Nadi. Ny ankehitriny dia 240 volt, amin'ny 50 Hz. Ny plug dia 3-prong mitovy amin'ny ampiasain'ny Aostralia.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Fidji sy ny fomba fivezivezena
Amin'ny fiaramanidina avy amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Avy any Los Angeles dia misy sidina 10 ora, ohatra. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia ny Seranam-piaramanidina Nadi ary eo amin'ny nosy Viti Levu izy io. Rehefa tonga ho azy a visa efa-bolana ny fahamendrehana, na dia saika ankapobeny aza, dia tsara foana ny manamarina fa ao anatin'ny lisitra io firenena io, mazava ho azy.
Indray mandeha eto mora sy mora ny mitety faritra. Ireo nosy lehibe dia manana zavatra tsara tamba-jotra bus ary ny mihetsika eo anelanelan'ny nosy no ampiasaina ny sambo. Misy koa ny taxi ary afaka manofa fiara ianao hizahana farafahakeliny ireo nosy roa lehibe indrindra, izay mahatratra 90% ny tambajotram-pifandraisana. Ankoatra ny ferry dia kely ihany koa fiaramanidina na sambo handeha ho any amin'ireo nosy manodidina.
Misy ihany koa ny kaompaniam-pitaterana an-trano roa miasa eto anelanelan'ny nosy manan-danja indrindra ary misy aza ny serivisy any amin'ireo nosy lavitra kokoa na dia tsy dia matetika loatra aza. Raha tianao ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia azonao atao foana ny manakarama iray avelany hitondra anao izy ireo. Ao amin'ny tranokalan'ny fizahan-tany no anananao ireo fampahalalana rehetra ireo ary tena feno.
Zavatra tokony hatao any Fiji
Hiditra ao Fiji ianao amin'ny alàlan'ny seranam-piara-manidina Nadi ao amin'ilay tanàna misy anarana mitovy miorina amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy Viti levu. Betsaka ny trano fandraisam-bahiny eto ary azonao atao ny mandamina ny andro sisa amin'ny dia rehefa avy nitety azy io.
Mpizahatany maro matetika no mitsambikina mankany Nosy Denarau, miorina manoloana ny morontsiraka, a nosy fivahinianana feno izay mifandray amin'ny nosy lehibe amin'ny sisiny fohy. Eo anelanelan'ny Nadi sy Denarau dia zara raha misy 10 kilometatra ary ny nosy dia tsy ahitana mihoatra ary tsy latsaky ny trano fandraisam-bahiny valo, torapasika tsara tarehy ary koa golf 18-hole.
Dobo, trano fisakafoanana misy kalitao iraisam-pirenena, fivarotana, fitsangatsanganana voajanahary ary izay rehetra tian'ny mpizahatany miala sasatra. Afaka tonga amin'ny taxi ianao na manararaotra ny serivisy fitaterana ao amin'ny hotely ary avy eto no ahafahanao mitsambikina mankany Mamanuca na Nosy Yasawa miaraka amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo sy sambo isan'andro.
ny Nosy Mamanuca Izy ireo no vondrona nosy akaiky indrindra amin'ny seranam-piaramanidina Nadi ary izy ireo no karatra paositry tsara indrindra any Fiji: rano turquoise, morontsiraka fotsy, hazo rofia misy voanio. Raha tianao ny fanatanjahan-tena amin'ny rano dia toerana tsara izany ary tsy miova raha mitsorika scuba sy snorkeling ny anao. Eto dia misy trano fonenana isan-karazany, avy amin'ny Lodges mankany amin'ny toerana ho an'ireo mpanao kitapom-batsy izay te hilalao onja fotsiny.
Avaratry ny Mamanucas no Nosy Yasawa, toeran-kaleha tsy misy fivarotana na banky, zavatra henjana kokoa ary lavitra ny sivilizasiôna. Raha vao ireo nosy ireo dia tsy azon'ny sambo fitsangantsanganana ihany ary tsy nisy olona afaka nijanona fa miaraka amina programa tsara ecotourism natolotry ny governemanta niova ary afaka mankafy ny torapasika mahafinaritra rehetra ny tsirairay.
Na dia misy aza ny fialan-tsasatra mahafinaritra eto izao dia toerana tsotra kokoa io, mety ho an'ny backpackers satria misy toeram-ponenana tantanan'ny olona eo an-toerana.
Yasawa dia malaza amin'ny fanaovana snorkel, sambo, kayak, lomano, trondro, fitsidihana tanàna, na grill. Any amin'ny faritra avaratry ny nosy dia misy lava-bato ary raha tsy atahoran'ny antsantsa sy stingrays ianao dia afaka milentika ao ambanin'ny ranon'ny nosy Kuata na Drawaqa akaiky. Ary farany, ny fahatongavana any Yasawa dia mitaky fitsangantsanganana an-dranomasina antsasak'adiny avy any Nadi na fitsangantsanganana mora.
Ankehitriny rehefa mijery sarintany ankoatry ny nosy Viti Levu eo akaikiny dia ny nosy Vanua Levu, nosy tsy dia mpizaha tany fa mahaliana ihany. Manana ny renivohiny ao Savusavu ary paradisa voajanahary izy io. Azonao atao ny mijanona ao amin'ny B & B tena tsara, hotely na hotely mpanao kitapom-batsy na amoron-tsiraka.
Amin'ny ankapobeny, ireo dia any amin'ny faritra mpizahatany maro kokoa, mifototra amin'ny fitsidihana antsitrika: any Natewa Bay dia afaka milomano miaraka amin'ny feso ianao, ao amin'ny Reserve Reserve an'ny Wasali dia afaka mandeha mitsangatsangana ianao ary mankafy ny fomba fijery mahafinaritra na manofa fiara ary manao ny Highway Hibiscus.
Avy any Nadi mankany amin'ity nosy ity ianao dia afaka tonga any amin'ny fiaramanidina na amin'ny sambo. Ao amin'ny nosy dia tsara kokoa ny mifindra amin'ny bus, misy serivisy mampifandray ny tanànan'i Savusavu sy ny an'ny Labasa na koa afaka mifindra amin'ny taxi ianao. Farany, tsy misy na inona na inona hiala ny Nosy Fiji raha tsy mitsidika sy mankafy ny Coral Coast: 80 kilaometatra amoron-dranomasina fotsy sy helo-miafina amin'ny morontsiraka atsimon'ny Viti Levu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Fety any Fiji, fialantsasatra any paradisa